Taariikhda My Butros » Xasasiyadda vs. Partner hadiyad u siiyay – Yaa Waxaad naxariiso doonaa?
by Amilia Davidson
Xasasiyadda vs. Partner hadiyad u siiyay – Yaa Waxaad naxariiso doonaa?
Last updated: Jan. 12 2021 | < 1
Caalami, xayawaankaaga waa qayb weyn oo ka mid ah inta badan nolosheena. Waxaan ma noolaan karaan iyaga oo aan; waxaan dhaqmaynaa sida xubnaha qoyska, waxaan iyaga ka gubanayn koolin, waxaan mar mar lagu daweeyo ka khayr badan la-hawlgalayaasha ama xaaskaaga ... Cilmibaaris dhowayd ayaa muujisay tirooyinka la yaab leh oo kaliya inta aynu ku tiirsan yihiin garsoore xayawaankaaga our 'dabeeco markii shukaansi la-hawlgalayaasha cusub oo ku saabsan, xawayaan rabbaayadaysan-milkiilayaasha haysta waafaqsan drive ka DateMyPet: "Haddii aad rabto in aad ii taariikhdana, aad leedahay si aad taariikhdana aan xayawaanka ".
Sida laga caroodo sida loogu dhawaaqayo, ha aanu door xayawaanka guriga si aan u xubnaha qoyska qaarkood? Si aad u sahamin jacaylka xayawaanada rabaayada ah our, infographic tani waxay bixisaa fudud kaakala barbardhig eegayaan kala duwan ee xidhiidhada u dhexeeya xayawaanka guriga noo, hawlgalayaasha iyo xubnaha qoyska, kala duwan ee caalamka, iyo favouritisms in hadiyad bixinta inta lagu jiro fasaxyada kala duwan.
Infographic Tani waxaa ka qayb qaatay by Amilia, oo wakiil ka ah GoneDigging.co.uk.
Sidee Love wuxuu kaa badbaaadin karaa of Dhibaato?
Sida loo hadal Dirty in xiriir
5 Rules of Noqoshada sedax kulan ah